Milicsiga Juventus Vs Roma: Hadallada Tabareyaasha iyo Filashada Caawa
HomeItalyMilicsiga Juventus Vs Roma: Hadallada Tabareyaasha iyo Filashada Caawa
02/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Fiidnimada caawa waxa ballansan labada kooxood ee ku tartamaya horyaalka wadanka Talyaaniga ee Juventus iyo Roma, kuwaas oo isku haleeli doona ciyaar saadaal badan laga sii bixiyey oo natiijadeeda lagu tilmaamay in ay caddayn doonto kooxda ku guuleysanaysa horyaalka waddankaas ee xili-ciyaareedkan.
Juventus oo hoggaanka ku haysa 12 dhibcood ayaa haddii ay kulanka caawa badiso waxa iska caddaan doonta in Roma ay ka quusan doonto horyaalka sannadkan, iyadoo laga horreyn doono 15 dhibcood.
Tababaraha Juventus, Massimiliano Allegri oo ka hadlay ciyaartan ayaa hoos u dhigay hadallada sheegaya in ciyaartani go’aamin doonto kooxda ku guuleysanaysa horyaalka, waxaanu tilmaamay in kooxdiisa ay muhiim u tahay in ay badiso balse aanay lahayn muhiimadda ay dadku sheegayaan.
“Waxay noqon doontaa ciyaar aad iyo aad mmuhiim noogu ah horyaalka laakiin aasaasi ma aha” ayuu yidhi Allegri.
Juventus oo lagu naanayso Duqda Gabowday (Old Lady) waxa xili-ciyaareedkan laga badiyey hal kulan oo kaliya oo ahaa ciyaar dhex martay kooxda Cecena, waxana ay gashay hal kulan oo barbar dhac ah oo ahaa kulankii Udinese dhamaan kulamadeedii kale ee horyaalkana waa ay wada guuleysatay.
Tababaraha Roma oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciyaartooyadiisa looga baahan yahay in ay madaxooda kor u qaadaan marka ay la ciyaarayaan Juventus kulanka caawa isla markaana ay ku dedaalaan in ay hoggaanka qabtaan bilowga ciyaartaba.
“Waxa aanu tegaynaa garoonka annagoo isa siinayna saddexda dhibcood, waana shaqada ay tahay in aanu qabanno, laakiin Juventus lafteeduna sidayada oo kale ayay samayn doontaa” sidaa waxa yidhi tababaraha Roma, Rudi Garcia.
Tababare Rudi Garcia oo u dhashay wadanka France, da’diisuna tahay 51 jir ayaa waxa uu intaa raaciyey in ciyaartooyadiisu u baahan yihiin taxadar iyo in taageereeyaashuna ay tahay in ay kooxdooda si fiican u taageeraan.
Ciyaartan ayaa ka dhacaysa garoonka Olimpico ee Roma.
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers — Highlights & All Goals
24/10/2017 Abdiwahab Ahmed
David Luiz: Chelsea waxay doonaysay inaan la sii joogo… laakiin aniga doortay PSG
Barcelona Oo Xaqiijisay In Goolhaye Bravo Ku Biirayo Manchester City
19/08/2016 Abdiwahab Ahmed